Thiha Lu Lin: June 2012
ပြည်တွင်းပြည်ပ က ယုံကြည်သူညီအစ်ကို မောင်နှမများ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အသင်းတော် နဲ့ ဝေးကွာနေစဉ်မှာ ဝိညာဉ်ခွန်အား ရယူနိုင်ရန်အတွက် အပတ်စဉ် တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း ဆရာတော်ကြီးများ ရဲ့ ဒေသနာတော်များကို ကျွန်တော့ရဲ့ Blog ကနေ ထပ်ဆင့်ဝေငှပေးလျက် ရှိပါတယ်။ ဒီတစ်ပတ်မှာလည်း ဆရာကြီး ဦးကပ်ခန့်ခုပ် ရဲ့ "လျစ်လျူမရှု... ယုံကြည်လက်ခံ" ဒေသနာကို ဝေမျှပေးသွားချင်ပါသေးတယ်။ ဒီ ဒေသနာတော်ကို ဆရာကြီးက ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လ (၁၁) ရက်နေ့က ရန်ကုန်၊ ညီအစ်ကိုများ အသင်းတော်မှာ တင်ပြဟောပြောခဲ့တာပါ။ ဖတ်ကြားနာသူ အယောက်စီတိုင်းအား အသစ်သော ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများ ဘုရားသခင် ပြင်ဆင်ပေးပါစေ။ Amen!
Posted by Thiha Lu Lin at 9:00 AM0comments
Posted by Thiha Lu Lin at 10:43 PM5comments
သားအဖနှစ်ယောက် ရှိပါတယ်။ ဇနီးသည်ဖြစ်သူ မရှိတော့ပေမယ့် ဖခင်ဖြစ်သူဟာ နောက်အိမ်ထောင် မပြုဘဲ ဘဝကို အေးအေးဆေးဆေး ဖြတ်သန်းလာခဲ့တာ သူ့သားရဲ့ တစ်သက်ပါပဲ။ အကြွယ်ဝ အချမ်းသာကြီး မဟုတ်တဲ့တိုင်အောင် အတော်အတန် ပြေလည်မှုရှိတာကြောင့် အပူအပင်လည်း မများလှပါဘူး။ ဒါကြောင့် သားဖြစ်သူရဲ့ နေထိုင်မှုဘဝအတွက် လိုလေသေးမရှိ ဖြည့်စွမ်းပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပညာရေးအရလည်း သားဖြစ်သူရဲ့ ရွေးချယ်မှုကိုလိုက်ပြီး အကောင်းဆုံး ဖြည့်စွမ်းပေးခဲ့တာချည်းပါပဲ။
Posted by Thiha Lu Lin at 3:00 PM2comments
Posted by Thiha Lu Lin at 1:30 PM0comments
တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း မပျက်မကွက် ဒေသနာတော်များကို ရပ်ဝေးရပ်နီးက ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေအတွက် ခွန်အားယူစရာ ပြန်လည်ဝေငှနိုင်ခွင့်ကို ဒီတစ်ပတ်မှာလည်း ထပ်မံရရှိလို့ ဘုရားသခင်ရဲ့ ကျေးဇူးတော်ကို ဦးစွာ ချီးမွမ်းပါတယ်။ အသင်းတော်ကို အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ဥပုသ်နေ့မှာ မလာရောက်နိုင်ကြတဲ့ ဘုရားရှင်ရဲ့သားသမီးတွေ ဝိညာဉ်ရေး အားမနည်းသွားစေဖို့ ကျွန်တော်လည်း ကိုယ်တတ်စွမ်းတဲ့ဘက်က ကြိုးစားတင်ပြဝေငှပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဒီတစ်ပတ်တော့ ဆရာကြီး အက်လိုင်းမင်း ရဲ့ "ဝိညာဉ်အလင်းကို ရ၍" ဒေသနာတော်ကို ဝေငှပေးသွားချင်ပါတယ်။ ဖတ်ကြားနာကြတဲ့ စာဖတ်သူ အယောက်စီတိုင်းကို ဘုရားသခင် ကောင်းကြီးပေးပါစေဗျာ။ Amen!
Posted by Thiha Lu Lin at 10:56 PM 1 comments
ဒီတနင်္ဂနွေနေ့လည်း ဒေသနာတော်ကို ဝေမျှခွင့် ရပြန်ပါပြီ။ ဘုရားသခင်ရဲ့ ကျေးဇူးတော် သက်သက်ကြောင့် ခုလို ဝေမျှခွင့်ရနေလို့လည်း ကျေးဇူးတော်ကို ချီးမွမ်းပါတယ်။ စာရေးသူ ကျွန်တော့အတွက်ကတော့ ဘုရားကျောင်း တစ်ရက်ပျက်သွားရင် လောကုတ္တရာအားထုတ်မှုပိုင်းမှာ ချက်ချင်း အားနည်းလျော့ကျ သွားတတ်လို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အမြဲ သတိနဲ့ ဆင်ခြင်နေရပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း အသင်းတော်နဲ့ ဝေးကွာနေရတဲ့ ပြည်တွင်း ပြည်ပ က ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေကို လောကုတ္တရာအမှုအရာမှာ မမေ့မလျော့ရလေအောင် ကြိုးစားလို့ ဒီလို ဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့ ဒေသနာတွေကို ရိုက်တင်ပေးနေရတာပါ။ စိတ်ပျက်စိတ်ညစ်စရာ များတဲ့ ဒီခေတ်ကြီးမှာ စာတန်သွေးဆောင်ရာနောက် အချိန်မရွေး ပါသွားတတ်ကြလို့ ဝိညာဉ်ခွန်အား ယူဖို့၊ တရားဒေသနာတွေ အမှန်ကြားနာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ လောလောဆယ်တော့ ကျွန်တော် ဗီဒီယိုတွေ တင်ပေးချင်ပေမယ့် အခြေအနေ မပေးသေးလို့ စာလေးတွေပဲ တင်ပြဝေမျှပေးနေပါတယ်။
ဒီတစ်ပတ်တော့ ဆရာကြီး ဦးတင်မောင်ထွန်း ရဲ့ "ဝမ်းမြောက်ခြင်း မဆုံးရှုံးစေနှင့်" ဆိုတဲ့ အရမ်း ခွန်အားရပြီး ဆင်ခြင်စရာဖြစ်စေတဲ့ ဒေသနာကို ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီဒေသနာတော်ကို ဆရာကြီးက ပြီးခဲ့တဲ့ မေလ ၂၇ ရက်နေ့က ဝေငှခဲ့တာပါ။ ဖတ်ကြားနာသူ အယောက်စီတိုင်းကို ဘုရားသခင် ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ အာမင်။
သူ့နာမည်နဲ့ ရုပ်ပုံလေး ဖုန်းမျက်နှာပြင်ပေါ်ပြေးလို့
နွေးမြမြ အသံချိုက ရင်ကို အရင်လို လှုပ်ခတ်စေမြဲလေ။
ကို... နေကောင်းရဲ့လား... မေးသံလေး လွင်လို့
ဆေးတစ်ခွက်လို ခန္ဓာကို အားအင်တွေ ပြည့်ဖြိုးစေမြဲလေ။
အိပ်မက်မှာ ငါလည်း ရင်ခုန်ပျော်ရွှင်နေတာ
ငါတို့နှလုံးသားတွေက နီးနေဆဲပါလားလို့ သိရတဲ့ခဏ
ပြန်လာရင် အရင်လို တံခါးလေးဟလို့
ကြိုနေမှာ ဘယ်သူမှ မဟုတ်တဲ့ တစ်ခုတည်းသော အချစ် ပါ။
ပြန်လာရင် ဖုန်းဆက်ပါ အချစ်ရယ်။
Posted by Thiha Lu Lin at 7:03 PM4comments
ဒီတနင်္ဂနွေနေ့လေးကလည်း ခါတိုင်းနေ့တွေလိုပဲ ဘုရားရဲ့ဘုန်းနဲ့ သာယာအေးချမ်းနေပါတယ်။ လောကီ အတွက် ပြီးခဲ့တဲ့ ခြောက်ရက်တာကာလလုံး ပင်ပန်းကြီးစွာ ရုန်းကန်ခဲ့ရပြီး ဒီတနင်္ဂနွေ ဥပုသ်နေ့မှာတော့ ဘုရားအတွက် အချိန်နာရီလေး ပေးဖို့လို့ လောကုတ္တရာအမှုအတွက် ကြိုးစားကြရပါဦးမယ်။ အပတ်စဉ် တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း ဝေမျှနေခဲ့တဲ့ ဒေသနာတော်တွေကို ဒီတစ်ပတ်မှာလည်း ထပ်မံဝေမျှခွင့်ပေးလို့ ဘုရားသခင်ရဲ့ ကျေးဇူးတော်ကို ချီးမွမ်းမိပါတယ်။ ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ဆရာကြီး ဦးကပ်ခန့်ခုပ် ရဲ့ ခွန်အားရစေတဲ့ တရားဒေသနာတော်ကို ဝေမျှပေးသွားပါ့မယ်။ ဒေသနာတော်ခေါင်းစဉ်ကိုတော့ “အသစ်သော ခွန်အား” လို့ အမည်တပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဆရာကြီးက ဒီဒေသနာကို ပြီးခဲ့တဲ့ မေလ ၂၀ ရက်နေ့က ဝေငှခဲ့တာပါ။ ထပ်ဆင့်ပြန်လည် ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။ ဖတ်ကြားနာသူ အယောက်စီတိုင်း အသစ်သော ခွန်အားနဲ့ ဝိညာဉ်ရေးမှာ နိုးထနိုင်ကြသလို ဘဝအောင်မြင်မှုများနဲ့ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများ ရရှိနိုင်ကြပါစေ။ အာမင်။